Sheekh Shariif oo dhulka la galay madaxweyne Farmaajo | War La Helaa Talo La Helaa
Home WARARKA MAANTA Sheekh Shariif oo dhulka la galay madaxweyne Farmaajo
Sheekh Shariif oo dhulka la galay madaxweyne Farmaajo
Madaxweynihii hore Shariif Sheekh Axmed ayaa khudbad dhinacyo badan taabaneysa waxa uu ka jeediyay shirweynaha beesha Mudulood maanta uga furmay magaalada Muqdisho, isagoo forta ku goday dhowr qodob oo ku saabsan xilliga kala guurka ah ee uu dalku marayo.
Sheekh Shariif oo ah guddoomiyaha madasha xisbiyada qaranka ayaa dhulka la galay hannaanka maamul ee dowladda madaxweyne Maxamed Cabdullaahi (Farmaajo), wuxuuna sheegay in madaxweynaha xitaa uusan la socon nooca doorasho ee dalka ka dhaceysa.
“Doorasho qof iyo cod ah ayaan rabnaa laakin aniga waxaan leeyahay Doorashada la qabanayo xitaa Farmaajo ma oga nooca ay tahay” ayuu yiri Shariif Sheekh Axmed oo sheegay inaanay suuragal ahayn in xilligaan aanay dalka ka dhici karin doorasho qof iyo cod ah.
Dhinaca kale waxa uu ugu baaqay beesha Mudulood inay qabtaan shir kale oo lagu xalinayo tabashooyinka beelaha walaalahood ah, inkasta oo aanu carabaabin magaca beeshaasi.
Hadalka Guddoomiyaha madaxa xisbiyada mucaaradka ayaa cirka ku laalay dadaalo la isugu soo dhoweynayo dowladda iyo madasha xisbiyada oo maalmahaan ka socday Muqdisho.